Faah faahin:- Nabadoon Sheekh Ibraahim Kabo-cadde oo xalay lagu dilay degmada Qoryooley – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nabadoon Sheekh Ibraahim Kabo-cadde oo xalay lagu dilay degmada Qoryooley
Wararka naga soo gaaraya degmada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in habeenkii xalay halkaasi lagu dilay nabadoon caan ka ah degmadaasi.
Koox hubeysan oo aan heybtooda la aqoonsan ayaa degmada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose ku dilay Allaha u naxariistee Nabadoon Sheekh Ibraahim Kabo-cadde, oo ka mid ahaa odayaasha waxgaradka ah ee degmadaas.
Dilka Nabadoon Sheekh Ibraahim Kabo-cadde ayaa illaa iyo haatan la garanayn waxa uu salka ku haayo, iyadoona kooxihii dilka geystay ay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen.
Ciidamada booliska oo markii dambe gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaanan ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan raggii ka dambeeyay dilka Sheekh Ibraahim Kabo-cadde.
Dhinaca kale, taliyaha saldhiga booliska ee degmada Qoryooley Cali Maxamed Aadan (Cali Waal) oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa dilka Sheekh Ibraahim Kabo-cadde ku eedeeyay inay ka dambeeyaan Al-shabaab.
Xaaladda degmada Qoryooley ayaa saakay ah mid degan, waxaana ka socdo howlgalo lagu baadi-goobayo kooxihii dilka u geystay Allaha u naxariistee Nabadoon Sheekh Ibraahim Kabo-cadde.
Ma jirto cid illaa iyo haatan lagu soo qab-qabtay howlgalka ciidamada booliska ay ka wadaan degmadaasi Qoryooley, iyadoona sidoo kale aysan jirin cid sheegatay mas’uuliyadda dilka Allaha u naxariistee Nabadoon Sheekh Ibraahim Kabo-cadde.